वेब डिजाइन सर्वेक्षण अतिरिक्त एक सूची | Martech Zone
बुधबार, अप्रिल 25, 2007 बुधबार, अप्रिल 25, 2007 Douglas Karr
यदि तपाईंसँग केहि मिनेट छ भने, उफ्रिनुहोस् एक सूची बाहेक र तिनीहरूको वेब डिजाइन सर्वेक्षण लिनुहोस्.
यो वास्तव मा वेब डिजाइन उद्योग मा पेशेवरहरु को रूप मा मा वेब डिजाइन को बारे मा एक सर्वेक्षण छैन। जानुहोस् ... यो लिनुहोस्! म तिमीलाई हिम्मत गर्दछु!
टोपी टिप जान्छ इयान!
अप्रिल 26, 2007 मा 5: 26 एएम
मैले सर्वेक्षणको लगभग 80% समाप्त गरें, जब एक ग्राहक आए। बैठक पछि म सर्वेक्षण समाप्त गर्न चाहन्छु, तर यो प्रश्न #1 मा फर्कियो।